Hurumende Yomanikidza ZIMSEC Kusakwidza Mari Yekunyora Bvunzo
Hurumende nhasi yamisa danho rekukwidza mari yebvunzo dzeOrdinary neAdvanced level rainge ratorwa neZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC.
Muchiitiko chafarirwa nevakawanda kusanganisira vadzidzi, varairidzi nevabereki, gurukota rezvedzidzo yepasi, VaCain Mathema, vati kunyange hazvo mari yainge yataurwa neZIMSEC ichienderana nemari inodiwa kunyora bvunzo dzegore rinoouya, hurumende yaona zvakakodzera kumbomisa kubhadharwa kwemari iyi zvichitevera zvichemo kubva kune veruzhinji.
Vati mari itsva ichaziviswa kana nhaurirano dziri kuitwa nebazi ravo pamwe navose vane chekuita nebvunzo idzi dzapera.
Asi vati pari zvino vabereki vanofanira kubhadhara mari dzavaibhadhara kare. Mutungamiriri wesangaano rinomirira vadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union, VaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti vanotambara danho ratorwa nehurumende vachiti mari yesarudzo inofanira kutobviswa.
Munyori mukuru wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe VaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti kana vana neZimbabwe vakabatana zvinhu zvinofamba.
Vati apawo hurumende yeterera vanhu uye ndizvo zvinofanira kuita nguva dzose. VaMajongwe vati mari yebvunzo inofanira kubuda mubhajeti renyika.
VaMajongwe vaenderera mberi vachiiti hurumende inofanira kutevedza bumbiro remutemo iro rinosungira kuti mwana wese munyika awane dzidzo yepasi.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro reZINASU VaTafadzwa Ngadziore vanoti kunyange hazvo vafara nezvaitwa vacharamba vachirwisa kuti mwana wese muZimbabwe awane dzidzo zvisinei kuti varombo here kana kuti vanowana.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vabereki vemuzvikoro, reNational Association of School Development Associations and Committees, VaBanny Manokore, vaudza Studio 7 vanofara kuti hurumende yatambira zvichemo zvevabereki.
Vatiwo muneremangwana hurumende inofanira kunzwawo kubva kuvabereki, varairidzi navose vane chekuita nebvunzo vasati vakwidza mari yesarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare, Success Majaramhepo, audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Masvondo maviri apfuura, ZIMSEC yakakwidza mari yebvunzo dzeO neA level.
ZIMSEC yakazivisa kuti chidzo chimwe cheO level chainge chave kuita zana nemakumi mapfumbabwe emadhora kubva pamadhora gumi nemashanu kozotiwo chidzidzo cheA level chimwe change chave kuita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva pamadhora makumi maviri.
ZIMSEC yakange yakwidzawo mari yevanonoka kubhadhara mari yebvunzo iyi.
Izvi ndizvo zvakarambwa nevarairidzi, vabereki pamwe neveruzhinji izvo zvakonzera kuti hurumende idududze. Vakawanda vanoti hazvibatsire kuwedzera mari ivdzo mari dzemihoro dzisiri kuwedzerwa uye vanhu vakawanda vasina mabasa.